Dowlada oo markii ugu horeesay iska fogeysay Arin muddo badan lagu eedeenaayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay markii ugu horeysay warar ku aadan in raga kasoo goostay Ururka Al-Shabaab lagu biiriyo ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed, xilli dadka arimaha ciidanka ka hadla Dowladda ay ku dhaliileen arimahaasi.
Wasiirka amniga C/kariin Xuseen Guuleed oo ka hadlaye Baarlamaanka hortooda, ayaa wuxuu sheegay in rag kasoo goostay Shabaab oo ay Dowladda ogtahay aysan ku jirin ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed.
Wasiir Guuleed, ayaa wuxuu sheegay inuu sicad usheegayo in wararka noocaasi ay yihiin been abuur, ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qeybahooda kala duwana aysan ku jirin rag Shabaab kasoo goostay.
Raga Shabaabka kasoo goosta ee Dowladda Soomaaliya isku soo dhiiba ayaa wuxuu sheegay in Dowladda ay udejisay qorshe cad oo ku aadan in ragaasi la dhaqancelinayo, kuwa dambiyadooda ay culus yihiin ee Shabaabka ahna loo gudbiyo Hay’adaha Garsoorka Dowlada si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado.
Marka laga soo tago hadalka Wasiirka amniga Soomaaliya ee ku aadan beeninta in xubnaha Shabaab kasoo goostay ay kamid yihiin ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa jiro xubno kamid ah ciidanka Nabadsugida oo Shabaab kasoo goostay hadana ciidamada la shaqeeya.
Waxaa kaloo jira ciidamo loogu magacdaray (Ruuxaanta) oo gabigoodaba ah Shabaab soocan kuwaasi oo farmuuqa raga kale ee Shabaabka ah ee howlgalada lagu soo qabto, sidoo kalena qaarkood dhabarka ka taabta,qofkii ay taabtaan ayaa waxaa la sheegaa inuu yahay Shabaab la aqoonsaday.
Inta badan Dhalinyarada ka tirsan Shabaab ee isku soo dhiiba Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu xareeya Xero lagu magacaabo SARANDA oo lagu dhaqanceliyo Shabaabka isa soo dhiiba.
Damiir Xumida Soomaalida, iyo Dalxiiska Qunsulka Kenya iyo Kismaayo Maxaan …
Ciidamada Booliska Dalka Kenya ayaa Mudooyinkaa Xarig iyo Tarxiil ku haya Soomaalida Qaxootigaa ee Dalkooda ku nool.
Waxaa jira in sidoo kale uu Magaalada Nairobi lagu Xiray Qunsulkii Safaarada Soomaalida ee Dalka Kenya,kaas oo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka Carootay.
sikastaba maanta ayaa Safiirka Kenya u jooga Soomaaliya waxaa uu Booqanayaa Magaalada Kismaayo ee Kenya Ciidamadeeda ay joogaan.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa Arintaas si xun u dhaliilay aygoona sheegay in Safiirka Maadaama uu Dalka Soomaaliya uu Kenya u Fadhiyo in uu Soomaalida dhibka la qeybsado.
WASIIRKA AMNIGA: Suuqyo Madow oo hubka lagu iibiyo ayaa Muqdisho ka jira”
Wasiirka Amnig Qaranka, C/kariin Xuseen Guuleed oo ka jawaabayay su’aalo ay xildhibaannada baarlamaanku shalay weydiiyeen ayaa sheegay in Muqdisho ay ku yaallaan suuqyo madoow oo lagu iibiyo hubka, balse ay dagaal kula jiraan.
Su’aashan oo uu weydiiyay mudne ka tirsan baarlamaanka ayaa ahayd wuxuu kala socdo suuqyo hubka dowladda lagu iibiyo oo ku yaalla Muqdisho isagoo sheegay inuusan jirin suuq si cad hubka loogu iibiyo, balse ay jiraan suuqyo madow oo qorsoodi ah oo hubka lagu kala iibsado ayna dagaal cad kula jiraan.
“Muqdisho waxaa ku yaalla suuqyo madow oo hubka lagu iibiyo, kuwaasoo si qarsoodi ah wax loogu kala gato, balse hay’adaha amniga ayaan farmay inay la dagaalamaan suuqyadaas, waana socdaa dagaalka lagu hayo,” ayuu yiri wsiirka.
Sidoo kle, kale wasiirka ayaa xusay in dadka hubka kala iibsanay ay yihiin kuwo kor iska yaqaan, qofka hubka laga iibinaya lagu heshiiyo meel uusan hub oolin, marka heshiiska la gaarana guryo ku dhow-dhow goobahaas laga soo siiyo hubka.
“Dadka hubka iibinaya ma ahan kuwo hub ku dhex haysta goobta ay markaa ku sugan yihiin, balse qofka ayay si hoose ula heshiiyaan, markaas kaddib ayay hubka kasoo siiyaan guryo ay ku qarsadeen, innaguna daba-gal ayaan ku haynnaa, xitaa meelaha qaarkood kaamirooyin qarsoon ayaan ku xirnay si aan ula soconno dadka hubka iibinaya,” ayuu wasiirku hadalkiisa ku daray.
Wasiirka Amniga Qaranka ayaa intaas ku daray inay jiraan dad lasoo qabtay iyagoo hub kala iiibsanaya, hubkiina ay kala wareegeen, balse ma uusan sheegin halka ay dadkaas ku dambeeyeen.
Hadalka wasiirka ayaa imaanayaa iyadoo xilliga meelo ka mid ah Muqdisho ay ka jiraan goobo hubka lagu kala iibsado, waxaana hubka la iibinaya ka mid ah kuwo aan horay loo isticmaalin.
Muqdisho ayaa waxaa horay uga jirtay suuqyo si cad hubka loogu kala iibisado, balse hadda suuqyadaas ma jiraan, waxaase weli jira goobo lagu kala iibsado hubka, kuwaasoo qarsoodi ah.
Warar sheegaya in Saraakiil Ahlusuna ka tirsan Iyo Odayaal ay xireen Itoobiya Jig-jiga loo gudbiyay.
Magaalada Jig-jiga ee Ismaamulka Soomaalida Dowlad deegaanka Itoobiya ayaa waxaa la geeyay todobo ruux oo isugu jirta Saraakiil Ahlusuna ka tirsan, Wariye iyo Odayaal kuwaasi oo ciidamada Itoobiya dhawaan ay xireen.
Xubnahan ayaa waxaa maalin kahor la geeyay Magaalada Jig-jiga, halkaasi oo la sheegay in maxkamad lagu soo taagayo, maadaama Dowladda Itoobiya ay ku eedeysay inay si sharcidaro ah uga tallaabeen xadka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Saraakiil ka tirsan Ahlusuna, ayaa shegay inay kuguda jiraan dadaal xoogan oo ku aadan sidii dadkaasi loosii deyn lahaa, waxaana ay sheegeen inay la hadleen masuuliyiinta Dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Dadka la xiray waxaa ku jira taliyaha ammaanka Guriceel Muuse Macallin Maxamed,Mursal Sheekh Maxamed Xeefoow, Wariye ka shaqeeya Raadiyo Galgaduud iyo rag kale oo Odayaal ah.
Waxaa dadkaas laga qabtay deegaan lagu magacaabo Toos-dheer oo u dhaxeeya xadka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana hadda loo gudbiyay Magaalada Jig-jiga.
Ficilkaan ay ku kaceen ciidamada Itoobiyaanka ayaa muujinaysa sida ay u bahdilayaan dadka Soomaaliyeed, maadaama masuuliyiin ka tirsan Ahlusuna iyo rag Odayaal ah ay xireen.
Gobalka Galgaduud, waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan Dowladda Itoobiya kuwaasi oo ku howlgala magaca Amisom.
Xog: Ka qeyb-galkii C/W Gaas ee shirkii Addis-Ababa iyo qaabkii loo weriyey oo muran ka dhex abuuray DFS.
Warbixin lagu daabacay shabakadda ku hadashay afka dowladda Soomaaliya ee (Radiomuqdisho.so ama radiomuqdisho.net) ayaa waxaa la soo sheegayaa in dood adag ay ka dhex dhalisay masúuliyiinta wasaaradda & suxufiyiinta qaabilsan maamulka shabakadaasi.
Suxufi ka howlgala Idaacadda oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso, ayaa sheegay in shalay ay kulan ku yeesheen xarunta Wasaaradda Warfaafinta shaqsiyaad ka tirsan maamulka Wasaaradda & suxufiyiintii shabakadda soo geliyey warbixin ay soo direen xubno ka mid ah wefdigii C/weli Gaas ee shirka kaga qeybgalay Itoobiya.
Suxufigan wuxuu xusay in la isku qabtay sida loo qoray warbixinta shirka Bahardaar Itoobiya, shirkaasoo ahaa shir loo soo agaasimay qaab aqoon-is-weydaarsi ah, laguna casuumay shaqsiyaad dalalkooda xilal ka soo qabtay, waxaana mowduuca shirkaasi u qornaa siddatan:- THE IMPACTS OF ILLICIT FINANCIAL FLOWS, ON PEACE AND SECURITY IN AFRICA.
Maamulka Idaacadda ayaa ku dooday in warbixinta laga dhadhansan karay in loo qoray Puntland in ay tahay dowladda Soomaaliya, halkii ay aheyd in warbixinta lagu muujiyo in Puntland oo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya in shirkaasi ay ka qeybgashay, wuxuna maamulku ku dhaliilay suxufiyiinta qaabilsan shabakadda dowladda in iyadoo aan wax tifaftirid lagu sameyn warkaasi sidiisii lagu soo geliyey.
Maamulka Idaacadda wuxuu u soo jeediyey howl-wadeenada Warbaahinta dowladda (Idaacad, Wargeys & Shabakad) in wararka ay baahinayaan ay noqdeen kuwa si hufan loo turxaan bixiyo, ayna jiraan shaqsiyaad shaqadaasi aqoon u leh oo wixii media- dowladda ka baxa ay jirto cid loo raacan karo.
Suxufigan warka na soo gaarsiiyey wuxuu sheegay in maamulka uu weydiiyey weriyeyaasha su’aalo ay ka mid ahaayeen;
“Siddee ayey ku dhici kartaa in war quraafaad ah lagu soo qoro hayád warbaahineed ee dowladda hoos tagta.? Siddee ayey ku dhici kartaa in shabakadda dowladda la soo geliyo war been ah oo lagu xayeysiinaayo Cabiweli Gaas.? Idaacadda ma Puntland ayaa maamusha.? Shabakadda dowladdu ma waxey u shaqeyneysaa qaabka shabakadaha kale ee ay beeluhu iska leeyihiin.?
Maamulka waxaa kale oo hadaladiisa ka mid ahaa sida uu soo sheegay suxufiga goob jooga ah;
“Waa run inuu tegay Cabdiweli Gaas Addisababa, wuxuu ka qeybgalay shir loo qabtay shaqsiyaad dalalkooda horay xilal uga soo qabtay, weliba khudbad kuma laheyn shirka wuxuu ka mid ahaa 4 qofood oo loo xilsaaray in ay yeeshaan (Table debate), in website kii Qaranka uu yiraa shir madaxda Afrika ayuu ka qeybgalay isaga oo metelaya dowladda Soomaaliya runtii ma aheyn wax jira. Idaacad, Wargeys & Website-yada ku hadla afka dowladda waxaa looga baahan yahay in ay noqdaan maskaxdii warbaahinta Soomaalida, ma ahan in war kasta oo ay soo qortaan maamulada Soomaalida sidiisa loogu soo daabaco, waa inuu jiraa nidaam dowladeed oo kala hagaya maamulada, qolo kasta haddii ay sheegato wixii ay doonto waxaa halkaas ka dhalanaya isbarbar yaac dhanka maamulka ah”
Suxufiyiinta ayaa qaatay in qaladka uu dhinacooda ka dhacay, waxeyna balanqaadeen in wixii hadda ka dambeeya in ay ku dedaali doonaan in ay turxan bixin ku sameeyaan wararka ay hawada gelinayaan.
Al-Shabaab oo fal-xaasidnimo kii ugu darnaa ku dhaqaaqday (Faah-faahin)
Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay shidaal ka shubteen booyad biyo loogu dhaaminayay dadka ay biyo la’aantu saamaysay ee ku nool deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan.
Qaar ka tirsan waxgaradka tuulada Halgan oo 41 km waqooyi ka jirta degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay Al-Shabaab shalay gelinkii dambe tuulada Qondolyay oo 4 km u jirta Halgan ay shidaalka uga shubteen booyadda.
Dadka ku nool tuulada Halgan ayay waxgaradku sheegeen in ay bixiyeen kharaska biyaha lagu soo dhaamiyay, si loo caawiyo dadka ay biyo la’aantu saamaysay ee ku nool deegaanadda miyiga ah ee gobolka.
Waxgaradka ayaa arrintaas ku tilmaamay in ay qeyb ka tahay cunaqabateynta ay maleeshiyadu ku hayso shacabka Soomaaliyeed.
Deegaannada miyiga ah ee gobolka Hiiraan qaarkood ayay ka jirtaa biyo la’aan baahsan, taas oo ay u dhinteen 11 qof toddobaadkii hore.
Safaaradaha caalamka ay ku lee yihiin Soomaaliya oo badankood degay…
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, ayaa la weydiiyay wax yaabaha uu kala socdo waddamada doonaya in ay safaarad ka furtaan Soomaaliya in ay deggeen xeebaha Soomaaliya oo halkaas ay xafiisyo ka furanayaan.
Wasiirku wuxuu sheegay in heshiiska loogu oggolaaday in waddamada caalamka safaaradahooda ka furtaan xeebaha uusan isaga waxbo kala socon oo “Dowladihii horre ayaa la heshiiyay” ayuu yiri.
Wasiirka wuxuu sheegay in muhiim tahay siddii waddamada doonaya in ay dib u dhisaan Soomaaliya lagu caawiyo wax yaabaha ay doonayaan.
Haddaba waxaa soo baxaya qorshe cusub oo dowladda safaaraddaha ka furanaya Muqdisho lee yihiin,
Ingiriiska, Turkiga, Imaaraadka iyo waddamo kale oo hadda doonaya in ay adkeeyaan calaaqaadka u dhexeeya Soomaaliya iyaga ayaa billaabay inay deggan oo xarumo ay ka sameeyaan dhulka xeebaha u dhow.
Wasiirka waxaa kaloo la weydiiyay bal wasaaradiisa wax yaabaha ay kala socdaan maamulada laga dhisaayo dalka.
Wuxuu sheegay in maamuladaas ay yihiin kuwa kumeel maadama uu socdo howgal ka dhan Al-Shabaab.
Si kastaba, ma cadda wax yaabaha hadda keenay in dowladdaha safaaraddaha ka furtay Muqdisho in ay deggaan dhismooyinka ka agdhow xeebaha Muqdisho.
DAAWO:- C/waaxid Goonjeex oo sir muddo badan qarsaneed daaha ka rogay
Siyaasiga C/waaxid Goonjeex ayaa daaha ka qaaday sir muddo aad ubadan ka qarsaneed shacabka Soomaaliyeed, islaamarkaana dhinacyo badan taabanaaya.
DAAWO SAWIRADA:- Daawo Sawirada:Madaxweynaha oo Kormeeray Xero Ciidanka lagu tababari doono.
Madaxweynaha Somaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud iyo Madaxda Safaarada Imaaraat-ka ee Somaliya ayaa waxay maanta kormeer ku tageen Xeradii hore ee Agoonta Degmada Dayniile oo dhisme hadda uu ka socdo.
Waxa hadda la qorsheynayaa markii uu dhismaha soo dhamaado laga dhigi doono Xero ciidanka lagu tababaro sida la sheegay.
Boosaaso: booliska oo soo bandhigay 12 qof oo lagu soo eedeeyey qarax.
Booliska magaalada Boosaaso ayaa maanta soo bandhigay 12 qof oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Ururka Al-shabaab, dadkaas oo dhammaantood lagu soo qabqabtay howlgal ay xalay ciidamada boolisku sameeyeen.
Eedeysaneyaasha oo saddex kamid ahi ay dumar yihiin, waxaa lagu soo bandhigay Xarunta Tliska Booliska ee Boosaaso, waxaana goobta xilligaas ku sugnaa mas'uuliyiinta ugu sarreeya maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso iyo saraakiisha ammaanka ee degmada.
Taliyaha booliska gobolka Bari C/raxmaan Cali Cabbaas (Muslim), ayaa sheegay in xalay magaalada laga maqlay qarax, qaraxaas oo aan khasaare geysan wuxuu ka dhacay goob sida uu tilmaamay lagu farsameynayey.
Boolisku ayuu taliyuhu sheegay in durbadiiba ay gaareen halka uu qaraxu ka dhacay, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen 12 qof oo qaarkood ay dhaawacyo fudud qabaan.
Ugu dambeyntii wuxuu sheegay in dadkan baaritaan lagu sameyn doono, mudda kooban gudaheedna sharciga lagu horkeeni doono kuwa dembiga loo haystaa uu ku caddaado.
Waa howlgalkii ugu horreeyey oo sanadkan 2014 ay ciidamada ammaanku halmar tiro intaas le'eg oo dad ah -oo la sheegay in Ururka Al-shabaab ay ka tirsan yihiin- ay kusoo qabteen.
Wasiirka Arimaha gudaha DF oo sir badan u sheegay Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa shalay la weydiiyay su’aallo dhowr ah oo la xiriira maamul u sameynta goballada dalka ee laga qabsaday Xarakada Al-Shabaab iyo wax yaabaha ay qabatay wasaarradiisa.
Wasiir mar uu jawaabayay maamulada laga dhisay dalka gaar ahaan gobalka Hiiraan oo loo soo celiyay guddoomiyihii horre.
Wasiirka wuxuu sheegay in maamulkaas uu yahay mid kumeel gaar ah oo dowladda aaney wadan laakin danta ay qabasatay in la sameeyo sidda uu yiri.
Wasiir Goodax ayaa xusay in seddax bil kaddib la badali doono maamulkaas iyo dhammaan maamulada KMG ah ee hadda dhisan.
Wasiirka waxaa kaloo la weydiiyay in dagaallada ka socda dalka ay barakiciyeen dad fara badan oo hadda harraad iyo baahi qarka u saaran ama u dhintay.
Wasiirka wuxuu carabka ku adkeeyay in aysan jirin cunto yeri balse arrimo la xiriira ammaanka ay jiraan oo waddooyinka qaar ay xireen Al-Shabaab, laakin mardhow arrintaas wax baa laga qaban doonaa ayuu yiri.
Waxaa la weydiiyya marka loo eego sidda loo magacaabo guddoomiyaasha degmo iyo heer gobal in wasaaraddu ay iska magacowdo, wuxuu sheegay in xukuumadda loo sheego wax kasta oo isbadal ah.
Baarlamaanka oo weli ku dhagan labo Wasiir oo Xukuumada Soomaaliya ka mid ah.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa weli ku dhagan labo Wasiir oo kamid ah Xukuumadda Dr C/wali Sheekh Axmed Maxamed, iyadoo maanta markale ay hortagayaan Baarlamaanka labadaasi Wasiir.
Wasiirada amniga iyo arimaha gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta markale kasoo muuqan doona fadhiga su’aalo weydiinta Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka Xildhibaanada ayaa wuxuu furmayaa 10:00 Subaxnimo ee saaka, waxaana sida xeer hoosaadka Baarlamaanka uu qabo, Wasiir Waliba su’aalo weydiinta ay ku soconaysa 90-daqiiqo oo udhiganta saacad iyo bar hadii waqtiga uu ka dhaco oo ay u harsan yihiin su’aalo maalin kale in loo dhigayo.
Labada Wasiir ayaa waxaa u kala haray 21- iyo 19 Xildhibaan oo su’aalo weydiin doona, taasi oo ku qotonta shaqooyinka ay hayaan Wasaaradahaasi Xukuumadda ka tirsan.
Labadii maalin ee aan soo dhaafnay, ayaa waxaa si aad ah su’aalaha loogu kululeeyay Wasiirka amniga C/kariin Xuseen Guuleed oo ay si aad ah ugu dhaganaayeen Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiir Guuleed ayaa noqday Wasiirka kaliya ee Baarlamaanka ay si adag ula xisaabtamaan, maadaama uu masuul ka yahay amniga guud ee dalka, si joogto ahna ay udhacaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka Muqdisho iyo Gobalada dalka Soomaaliya.
Puntland oo ka dhawaajisay war Somaliland ka nixiyay.
Maamulka Puntland ayaa ka dhawaajiyay war ka nixiyay Somaliland ka dib markii maamulkaasi uu sheegay in ciidamo iyo hub uu u diray degmada Taleex.
War kasoo baxay wasaaradda amaanka Puntland ayaa lagu sheegay ka dib markii loo adkeysan waayay daan daansiga Somaliland in Taleex loo diray ciidamadii ugu badnaa.
Ciidamadaan ayaa lagu sheegay in ay qaban doonaan ilaa Laascaanood, ayna la dagaalamaayaan ciidamada Somaliland waa sida hadlka loo dhigaye.
Dhanka kale waxaa la sheegay in dhamaan shacabka ku dhaqan Taleex looga baahanyahay inay ka qeyb qaataan wax lagu sheegay Xureenta Laascaanood.
Jaamac Xersi Axmed oo Shacabka Soomaaliyeed cafsi weydiistay “Waxbaan ka riday Maxamed Siyaad” Murugo!!
Jaamac Xersi Axmed oo ka mid ahaa ragii wax ka riday dowladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre ayaa shacabka Soomaaliyeed cafis weydiistay, waxaana uu sheegay in mas’uul uu ka yahay waxa maanta socda kaalinna uu ka qaatay.
Waxa uu tilmaamay in isaga uu ku hayb ahaa Maxamed Siyaad Hase ahaatee dano gaar ah oo uu ka waayay darteed uu wax ka abaabulay qorshihii Siyaad Dalka looga saaray.
Waxa Jaamac Sheegay in uu ka shalaayo markii uu soo xusuusto wixii uu sameeyay, waxaana habeen iyo maalin uu tilmaamay in uu iska ilmeeyo, marka uu arko Soomaali sida ay tahay iyo sidoo kale halka ay joogtay.
““Waxbaan ka riday Maxamed Siyaad, kuma fikirin in waxaan imaan doono, waxaan aad u xasuustaa Maxamed Siyaad oo leh aniga dalbaan ka tagay, dadkiisa qaarna wey I necbeesteen, waxaan kaloo xusuustaa hadalo run ahaa oo uu ku dhahay markii ugu dambeysa, Maxaa maatida loolaynayaa, waa maxay barakaca aaway Soomaalinimada, war dad shisheeye ayaa idiinku shaqeysanaaya”
Waa ayaan daro ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay in Soomaaliya dhibaato rag isaga uu ka mid yahay u geesteen ay ilaa hadda ku jirto, waxaana uu dalbaday cafis.
XOG MUHIIM AH:- Dadka dalka qaska ku haayo oo qaarkood la ogaaday (AKHRISO)
Dalka Soomaaliya waxaa u tashtay dad badan o cadow ku ah, waxaana dadkaasi kala yihiin ajaaniib, iyo sidoo kale Soomaali, hase ahaatee waxaan kaloo helnay xog kale oo muhiim ah kuna saabsan qaar ka mid ah dadka dhibka wada.
Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii dagaalada ay dhaceen, waxaa jiray dad badan oo dalka isaga baxay, waxaana jira aqoonyahano, saraakiil, iyo rag kale oo muhiim ahaa misane dalka ka cararay.
Balse waxaa soo baxay maanta siyaasiin qurba joog ah oo dalka nabadiisa aan raali ka ahayn, maxaa yeelay hadii dalka nabad noqdo iyagaba qurbaha kuma noolaan karaan.
Sidaa darteed waxay doorteen in dalka ay qasaan, tusaale Baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku jira Xildhibaano haysta baasabooro kale, waxayna yihiin kuwo hadhoow markii xaajada xumaada dalka ka carara, wasiirada sidoo kale, halka madaxdii dalka soo martayna la ogyahay badi dibadda inay ka yimaadeen oo markii xilalka ay waayaanba ay cararaayeen.
Soomaaliya waxaa wax u qaban kara nin aan waligiis dalka ka bixin, dhibaatada waxbadan ka ogaa, sidoo kale waxaa hadda maskax Faresh ah ku jirtaa dhalinyarada dalka gudahiisa ku sugnaa kuna bar baaray colaada, waayo hadii talada loo dhiibo waxay keenayaa nabad maxaa yaalay dhalinyarada waxay ku haminaayaan inay arkaan dalkooda oo nabad ah, sababtuna waligood ma aysan arag nabad.
Balse nin ka yimid dhul nabad ah, berina laaban doona, waligiis ma keeni doono guul ama dalka oo nabad ka hana qaado.
Maxamuud Qaalib oo ka hadlay dilal loo geystay labo askari oo mid kamid ah hubkiisa laga qaatay.
Saraakiisha dhanka ammaanka Maamulka KMG ee Jubba, ayaa ka hadlay dilal maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay Magaalada Kismaayo oo qaarkood loo geystay askar ka tirsan Maamulka KMG ee Jubba.
Maxamuud Qaalib Cali oo ah taliyaha ammaanka Magaalada Kismaayo, ayaa wuxuu sheegay in habeen hore Magaalada Kismaayo lagu dilay labo askari oo ka tirsan Maamulka Jubba, mid kamid ahna qorigiisa laga qaatay.
Qaalib, ayaa xusay inaan si dhab ah loo ogeyn cida ka dambeysa dilalka loo geysanayo Askarta Maamulka KMG ee Jubba, wuxuuse qaab tuhun ahaan ah ugu eedeeyay inay ka dambeeyaan rag uu ku sheegay inaaneyn dooneyn nabada ka jirta Gobalada Jubbooyinka.
Askariga habeen hore Kismaayo lagu dilay ayaa waxa uu dilkiisa ka dhacay aagga Imperatoria, oo ka tirsan Xaafada Calanley, iyadoo la sheegay in si gaadmo leh rag hubaysan ay udileen askarigaas.
Ragga dilka fuliyay oo tiradoodu lagu sheegay laba nin, balse uu la socday nin kaloo kaabaayay (Ilaalo ka haayay), ayaa waxay halkaasi kala baxsadeen qori AK47 ahaa, oo uu watay askariga la dilay.
Maxamuud Qaalib Taliyaha ammaanka Kismaayo, ayaa wuxuu sheegay in isla habeenkaasi askari kale lagu dilay Magaalada Kismaayo bartamaheeda, taasi oo ka dhigaysa in habeen hore kaliya Kismaayo lagu dilay labo askari oo maamulka Axmed Madoobe ka tirsan.
Dilalka qorsheysan ayaa joogta ka noqday magaalada Kismaayo, xilli laamaha amniga u qaabilsan maamulkaasi ay sheegayaan inay wadaan baaritaano ku aadan cida ka dambeysa dilalka askarta loo geysto.
Qaramada Midoobay oo sheegtay inaan la dhayalsan karin qatarta Al-Shabaab ay leeyihiin.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inaan weli la dhayalsan karin qatarta Xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya, xilli muddooyinkaan dambe Shabaab laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan Gobalada dalka Soomaaliya.
Nichlos Kay Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay dalka Soomaaliya, ayaa sheegay in hada xaalada dalka Soomaaliya ay mareyso ay tahay mid wanaagsan, Al-Shabaabna laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan Gobalada dalka Soomaaliya.
Iyadoo xaalada dalka uu ku sheegay inay tahay mid wanaagsan Mr Kay, hadana iskama uusan indha tirin qatarta ay leeyihiin Al-Shabaab, marka loo eego weerarada kala duwan oo ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya iyo dilalka qorsheysan ee ay fulinayaan.
“Al-Shabaab waxaa saaran cadaadis badan waxa ay miciin bidayaan falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka iyo dilalka ay geysanayaan” Ayuu yiri Mr Kay oo la hadlay Tv-ga Al Jazeera.
Nichlos Kay ayaa intaasi raaciyay “Aad ayaa loo daciifiyay Al-Shabaab balse weli waxa ay leeyihiin qatartooda, sababtoo ah dagaalyahano Ajaanib ah oo dalka Soomaaliya jooga ayeey ka helaan taatiko kala duwan”.
Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay dalka Soomaaliya Nichlos Kay, ayaa sheegay si looga guuleysto Al-Shabaab inay haboon tahay in juhdi iyo dadaal badan lagu bixiyo dhisida ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ciidanka ay meesha uga saaraan Shabaabka dhibaatada Soomaaliya ka wada.
Al-Shabaab ayaa todobaadkii aan soo dhaafnay waxa ay Magaalada Muqdisho ku dileen labo Xildhibaan oo Baarlamaanka dalka ka tirsan, midkalena waa ay dhaawaceen, taasi oo ka dhigtay inay si weyn usii muuqato qatarta Al-Shabaab ay leeyihiin.
Xog: Abaanduulaha ciidanka xoogga iyo wasiir kusoo fashilmay Kismaayo.
Abaanduulaha ciidamada Gen. C/risaaq Khaliif Cilmi iyo wasiir ku xigeenka isgaarsiinta Axmed Cali Salaad Taako ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo halkaasoo ay ka wadeen qorshe hubka looga dhigayo ciidamada ku sugan deegaanka Goobweyn.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wasiir ku xigeen Taako iyo abaanduulaha ciidamada ay isaga soo huleelayaan Kismaayo, kuna laabanayaan Magaalada Muqdisho, kadib markii ay ku fashilmeen qorshaha lagu doonayey in lagu soo xareeyo ciidama ku sugnaa deegaanka Goobweyn oo ah ciidamadii deegaanka ee taabacsanaa dawlada federaalka ee sanadkii hore dagaalka looga saaray magaalada Kismaayo.
Wasiir ku xigeenka iyo abaanduulaha ciidamada ayaa mudooyinkan ku sugnaa magaalada Kismaayo, waxaana warar aan ka heleyno ilo wareed ku sugan Kismaayo ayaa xaqiijinaya in qorshaha joogitaanka saraakiishan uu ka dambeeyo R/W C/weli Sheekh Axmed oo isaga laftiisa dhowaan tagay Kismaayo.
Fashilka ayaa ka dambeeyay markii ciidamadii joogay Goobweyn iyo saraakiishooda ay diideen inay hubkooda wareejiyaan, ayna gudaha u galaan Kismaayo. Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in lacago fara badan loo ballanqaaday qorshahan hubka looga dhigayo ciidamadan laguna doonayey inay Kismaayo ku xaroodaan iyagoo sacboolay ah.
Arrimaha dib u heshiisiinta Kismaayo ayaan weli fari ka qodneyn, sida ay qabaan dad badan oo ku xeeldheer arrimaha gudaha, waxaana caqabada ugu weyn ay ka taagan tahay colaad beeleedka oo aan weli la xallin iyo boqollaalkii ka barakacay Kismaayo oo deegaankoodii iyo hantidoodii la boobay oo aan weli laga hadlin.
Xog & Gorfeyn: Khilaafka Siyaasadeed ee Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Tan iyo Xornimaddii dalka Somalia marna heer wanaagsan ma gaarin xiriirka Somalia iyo Kenya, waxaana taasi ugu wacan muranka soo-jireenka ee dhulka NFD ee W/bari ee dalka Kenya oo uu Gumeysigii Ingiriiska u hibeeyey Kenya.
Dowladihii soo maray labada dal waxay ogaayeen gocashadaasi, iyadoo Dowladda Kenya sheegtay inaan gorgortan laga geli Karin Milkiyadda Deegaannadda NFD oo ay Qowmiyadda Soomaalidu deggankoodu yahay.
Caburin Milliteri oo saamayn ku yeelatay dadka deegaanka ayaana lagu xusi karaa Sooyaalka Taariikhda ee Goballadda NFD, taasi oo keentay inay dhismaan Jabhaddo Xornimo-doon ah, laakiin Jabhadahaasi waxaa lagala hortegay gacan bir ah.
Xasuuqii Wagalla ayaa lagu tilmaamaa Xasuuqii ugu argagaxa badnaa ee lagula kacay Soomaalida degganaa NFD, iyadoo la sheegay inay Askarta Kenyaatiga si saf-mareen ah u dileen in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo lagu dilay deegaan 10-km u jirta Degmadda Wajeer.
Xasuuqaasi ayaa ku taariikheysan bishii February 10-dii ee sannadkii 1984-kii, waxaana dhegta dhiigga loo daray Kumanaan qof oo ka mid ahaa Soomaalida degganaa Gobalka NFD ama W/Bari ee dalka Kenya.
Muranka dhulka ka maqan dal-weynaha Somalia ayaa u muuqda inay hadal-hayntiisa meesha ka baxday tan iyo wixii ka dambeeyey, markii uu burburka ku yimid Nidaamka Dowladnimo ee Somalia, isla markaana Soomaalida galeen Cahdi Dowlad la’aaneed.
Burburkii Dowladnimo ee Somalia waxay fursad siyaasadeed u noqotay Kenya maadaama ay ka yaraadeen cabsidii Dowladdii Kacaanka iyo cabsidii ka haysatay Kacdoonka dadka Reer NFD ee Xornimo-doonka ahaa.
Maamulayaasha Kenya waxay dardar-geliyeen inay Soomaalida soo qaxay ku soo dhaweeyaan dalkooda, waxayna u qoondeeyeen Xerooyin Qaxooti oo ku yaalla Goballadda W/bari oo ay haatan ku jiraan in ku dhow 500,000 oo qof.
Miisaaniyad xoog leh ayaa uga soo burqatay Xerooyinka Qaxootiga, maadaama ay Hay’addaha QM, siiba Hay’adda Qaootiga ee UNHCR kharajkooda ku bixiyaan Adeegyadda darruuriga ee ay uga baahan yihiin gudaha Kenya.
Furfurnaanta dadka Soomaalida ayaa horseeday inuu kobco dhaqaalaha Kenya iyo inay dhismaan Mashaariic ganacsi oo ay Reer Kenya galti ka ahaayeen.
Ganacsatadda waa weyn ee hantidooda kala soo cararay dagaalladdii sokeeye, kuwii beeleed iyo kuwii siyaasadeed ee dalkeenna ka holcayey tan iyo sannadkii 1992-kii ayaa waxay Maalgashi Mashaariic Ganacsi ka bilaabeen Xaafadda Islii ee magaalladda Nairobi.
Islii oo noqotay ubucda ganacsiga iyo deegaanka ee dadka Soomaalida ayaa waxaa laga hirgeliyey kumanaan goobo Mehraddo Ganacsi iyo Deegaan.
Dabaqyadda casriga iyo Dukaamaha waa weyn ee badeecad kasta lagu iibiyo ayaa waxaa ka hinaasay Muwaadiniinta Kenya oo iyagu la anfariiray Soomaalida soo-galootiga sida ay Hawlaha Ganacsiga u kala wadaan.
Dadka Soomaalida waxay yeesheen caddaawad iyo in loo quuri waayo Hantida Balaayiinta Dollar ee Islii ku kaydsan, taasi ayaana la rumeysan yahay inay soo dedjisay Hawlgalka ay Ciiddanka Ammaanka ku raafayaan dadka Soomaalida ka soo qaxday dalka Somalia.
Hawlgalladda dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay ka socda magaalladda Nairobi ayaana keenay in aad loo fekero Khatarta ka dhalan karta Raafka baahsan ee Soomaalida keliya lagu soo koobay.
Hawlgalladda Boliska Kenya waxaa kaloo uu saamayn ku yeeshay dadka Soomaalida-Kenya oo iyagu Kenyaatiga kale ku tilmaamaan Kenyaatiga Heerka Labaad.
Qiimeynta noocaasi ah ayaa waxaa suurtogal ah inay Soomaalida-Kenya wax badan ka fekeraan iyo inay soo gocdaan dhacdadii xasuuqa ee 30-sanno loo geystay Waalidiintooda.
Sioo kale, Ganacsatadda Soomaalida ka soo qaxday dalka Somalia ayaa iminka ku soo baraarugay Hawlgalka Raafka, iyadoo ay Ganacsataddu walaac xooggan ka muujinayaan Khatarta ka dhalan karto Raafka socda iyo muranka dhinaca Diplomaasiyadda ee Dowladaha Somalia iyo Kenya ka dhex aloosan.
Xeeldheerayaasha Ganacsiga iyo Dhaqaalaha ayaa rumeysan haddii la qiimeeyo hantida Ganacsatadda Soomaalida ku leeyihiin Xaafadda Islii inay kor u dhaafayso lacag dhan Trillion Dollar.
Dhaqaalahaasi ayaa waxay isugu jiraan Hanti Ma-guurto iyo Hanti Lacageed Kaash ah, waxaana tiiraanyo iyo tacab beel noqon karta haddii ay Dowladda Kenya ama Kooxo shaar dowladeed wata u soo bareeraan inay dhacaan Ganacsatadda Soomaalida ama ay si fudud ula wareegaan Hantida la soo tacbayey 30-kii sanno ee la soo dhaafay.
Xeeldheerayaasha Arrimaha Bulshadda ayaa iyagana rajo-beel ka muujinaya inuu Kacdoonka Raafka ee Soomaalida keliya lagu ugaarsanayo u sii xuubsiibto Kacdoon Qaramayn oo ay dadka Kenyaatiga kula wareegayaan Hantida Ajaaniibta oo ay Soomaalida ugu horreyso.
La-wareegga noocaasi ayaa suurtogal ah inuu yimaado haddii aysan Labada Dowladood xal u helin mushkilladda ka dhalatay raafka aan loo maydaan dayin.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Kenya ayaa rumeysan inay Soomaalida u soo xawileen qaraxyo iyo deganaansho la’aan , laakiin taasi beddelkeeda Soomaalida waxay aad u rumeysan yihiin in imaaanshahoodii Kenya wax badan laga macaashay oo ay wax ku soo kordhiyeen Dhaqaalihii iyo nolosha Bulshadda Kenya.
Maraykanka oo ka dayriyey Soomalida ku xabisan garoonka Kazarani, Nairobi.
Shir ay Jaalliyadda Soomaalida ku dhaqan Gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka shalay qabanqaabiyeen ayaa looga hadlay Falalka ay Boliska Kenya ku raafayaan Soomaalida sharci-darradda ku joogta dalkaasi.
Madaxa Naadiga Muwaadinta Soomaalida ku nool Gobalka Minnosata, Jibril Afyare ayaa sheegay inay cambaareynayaan Hawlgalka Boliska Kenya ku raafayeen dadka Soomaalida.
Jibril Afyare waxa uu sheegay in Raafka lagu hayo Soomaalida ku nool Kenya tahay xiisad caalami iyo mid Aaminimo, isla markaana loo baahan yahay inay Beesha Caalamka wax ka qabtaan tacadiyadaasi ka baxsan Xuquuqda Aadanaha.
Tobaneeyo Hoggaamiyayaal ka mid ah Jaalliyadda iyo Siyaasiyiin ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ee haya talada Maraykanka iyo Ururka Adduun bilaa Xasuuq sh ayaa ka soo qeyb galay Kulankaasi.
Karen Kalerk iyo Keith Ellison oo ah Mudanayaal ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin Hawlgalka ay Boliska Kenya ku raafeen dadka Soomaalida.
Kareen Kalerk waxay sheegtay inay tahay wax laga argagaxo waxa Soomaalida ku haysta Garoonka Kazarani ee magaalladda Nairobi.
“Kazarani ma aha magac, waxaan doonayaan in aaan haatan iska illaawo Kazarani.
Waxay sheegtay inay diyaarinayso sidii Qaraar cambaarayn ah looga soo saari lahaa tacadiyadda Soomaalida ku haysta Kenya.
Keith Ellison ayaa isagana sheegay inuu kiiskaasi geyn doono halka looga taliyo Maraykanka, isla markaana uu doonayo inuu Safiirka Kenya u fadhiya Washington la kulmo si uu u gudbiyo in wax laga qabto dhibaatooyinka dadka Soomaalida ku haysto Garoonka Ciyaaraha ee Kazarani ee magaalladda Nairobi.
“Dalka waa waddan isir-nacayb ka jiro, waxa uu Xafiiskayga tusaale u noqonaya sidii ay Boliska Kenya u joojin lahaayeen tacadiyadda ay dadka Soomaalida u geystaan, waana sii wadi doonaa cadaadiska arrintaasi” ayuu yiri Keith Ellison oo ah Siyaasiga keliya ee Muslimka ah ee ka tirsan Kongareeska Maraykanka.
Dowlada Suudaan oo Balanqaad u sameysay Dowlada Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga wadanka Suudaan Cabdiraxiin Maxamed Xuseen ayaa sheegay in dowladiisa ay diyaar u tahay inay siiwado taageerada ay siiso dowlada Soomaaliya ee dhanka ciidanka ah.
Arintaan ayaa waxay ka danbaysay kadib markii magaalada Khartum ay kulan kuwada qaateen labada wasiir ee gaashaandhiga Soomaaliya iyo Suudaan.
Wasiirrada Gaasaandhigga Soomaaliya iyo Sudan ayaa booqday xarunta wasaaradda Difaaca dalka Sudan ee magaalada Khartoum, wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, ayaa lagu soo wareejiyey dhammaan qeybaha wasaaradda Difaaca, waxaana faah-faahin ka siiyey howlaha ay qabato wasaaradda dhiggiisa dalkaasi.
Wasiirka Gaashaandhigga dalka Sudan Cabdixakiin Maxamed Xuseen, ayaa mar kale u mahadceliyey dhiggiisa Soomaaliya, waxa uuna sheegay in ay sii wadi doonaan taakuleynta ay siiyaan ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya ee dhinacyada qalabka iyo Tababarrada.
Dowladda Sudan ayaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya ka caawinaya dhinaca ammaanka sida tababarada ciidammada kala duwan iyo bixinta taakuleynt joogto ah, taasi oo sii xoojisay xiriirka u dhaxeeya labada dowladdood.
Al-Shabaab oo Xalay Dagaal xoogleh ku soo qaaday Degmada Heliwaa.
Al-shabaab ayaa Xalay Weerar ku qaaday Degmada Hiliwaa, Fariisimo Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Degmada.
Dagaalka ayaa ka dhacay Xaafada Al-cadaala iyo Suuqa Degmada Hiliwaa, oo ay fariismo Ciidan ku leeyihiin Ciidamada DFS.
Dagaalka ayaa Geeystay Khasaaro Dhimasho iyo Dhaawac ah, oo soo kala gaaray Garabyada Dagaalamay iyo Dadka Shacabkaa intaba.
Inta la og yahay Dagaalka ayaa waxa ku Geeriyooday ugu yaraan 4 Ruux oo Shacab u badan iyo Dhaawac intaa ka badan.
Gudoomiye Xigeenka Amaanka iyo Arrimaha Bulshada C/Xafiid ayaa Xafiiska Alldhacdo.com ee Muqdisho u sheegay in Dagaalka Hal Askari uu Ciidamada Oga Geeriyooday, laakiin Khasaaraha uu shacabka u badan yahay.
Degmada Hiliwaa ayaa waxaa ay noqotay Degmada Kaliya oo Al-shabaab Xili kasta ay Weeraro ka geeystaan oo ku taala Gobolka Banaadir.
DEG DEG:- Dowladda Soomaaliya oo go’aan geesinimo leh qaadatay ka dib markii..
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay si deg deg ah ugu yeertay Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, arintaasi oo ka dambeysay, kadib markii Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya ay xireen ciidamada ammaanka dalkaasi Kenya.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxuloow oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay aad uga xun tahay tallaabada lagu xiray Qunsulka Soomaaliya ee dalka Kenya.
Wuxuu ku tilmaamay falkaasi mid ay canbaareynayaan Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya, isaga oo sheegay in Wasaarada arimaha dibada Soomaaliya la faray inay war cad ka keento tallaabada masuulkaasi ciidamada Kenya ay ku xireen.
Wasiirka Warfaafinta ayaa tilmaamay in si deg deg ah loogu yeeray Maxamed Cali Ameeriko Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya iyo Qunsulka Safaarada ayna imaanayaan Magaalada Muqdisho.
Cali Ameeriko oo la hadlay Idaacada BBC-da ayaa sheegay inuu tagi doono magaalada Muqdisho si uu ula kulmo madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, isaga oo dhanka kale sheegay in warqad cabasho deg deg ah ay uqoreen Wasaarada arimaha dibada Kenya.
Tallaabada lagu xiray Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa muujinaysa in Kenya aysan qadarin uhaynin Soomaalida iyo Siyaasiyiintooda intaba, iyadoo Siyaad Maxamuud Shire uu ciidamada usheegay inuu yahay Diplumaasi balse arintaasi ay ka dhaga fureesteen.
Arintani ayaa saameyn waxa ay ku yeelan kartaa Xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Kenya.
Korneel Barre Hiiraale oo ka hadlay shirka beelaha dega Jubbooyinka ee ka socda magaalada Kismaayo.
Korneel Barre Aadan Shire(Barre Hiiraale) oo kamid ah hoggaamiyeyaashii ku dagaalamay magaalada Kismaayo iminkana isaga iyo ciidamadiisa ay fadhiyaan meel qiyaastii Kismaayo u jirta 15KM ayaa sheegay inuusan quseynin shirka magaalada Kismaayo uga soconaya beelaha ka soo jeeda Jubbooyinka.
Shirkan oo ay fureen madaxweyne ku xigeenka maamulka KMG ee Jubba Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil(Fartaag) iyo wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya waxaa isugu yimaaday odayaasha dhaqan iyo waxgaradka ka soo kala jeeda Beelaha ay ku kala abtirsadaan Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale.
Barre Hiiraale ayaa sheegay in shirkaasi uu yahay mid lagu kicinayo dagaal isla markaana uusan ahayn mid looga hadlayo danaha dadka Jubbooyinka wada dega iyo nabadgelyada magaalada Kismaayo.
“Shirkaas annaga ma aqoonsanin dad gaar ah ayaa doonaya inay colaad uga dhex abuuran beelaha walaalaha ah” sidaas waxaa sheegay Korneel Barre Hiiraale.
Weli waxaa deegaanka Goobweyn jooga Korneel Barre Hiiraale iyo ciidamadiisa kuwaasoo halkaa muddo ku sugan iyadoo dhowaan ay ka biyo diideen in magaalada ay dib ugu soo laabtaan.
Dowladda oo go’aan ka qaadan doonta Kenya & Safiir Ameeriko oo afka furtay.
Dowladda Kenya ayaa sii badisay tacadiyada ay ku hayso dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo dalkaasi ka joogaan, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay dhibaato soo wajahdo.
Iyadoo midaasi ay jirtay ayeey hadana sharci darro waxay xabsiga ku dhigeen Qunsulka Soomaaliya u jooga magaalada Nairobi taa oo caro xoogan keentay.
Safiirka Soomaaliye ee Kenya Maxamed Cali Ameeriko waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay dhibaatada halkaasi ka taagan, waxaana uu tilmaamay in warqad uu u qoray dowladda Kenya gaar ahaan wasaaradda arimaha dibadda.
Ameeriko ayaa sheegay sidoo kale in Muqdisho uu kusoo wajahan yahay ka dib markii ay u yeertay dowladda Federaalka ee Soomaaliya, iyadoona dowladda laga yaabo go’aan cad inay kasoo saarto arimaha Kenya.